Ma laga yaabaa in la siidaayo Qalbi-Dhagax? - BBC News Somali
Image caption Sawirka cusub
Labo bilood ka hor Itoobiya waxaa ka dhacay isbadal siyaasadeed oo mug weyn. Waxaa yimid ra'iisul wasaare cusub,Gudoomiye baarlamaan oo cusub iyo waliba isbadal kooban oo xaga golaha wasiirada lagu sameeyey.
Image caption Bashiir Makhtal Daahir (Dhexda) ayaa dhawr iyo tobon sano u xirnaa Itoobiya
Image caption Cabdiraxmaan Yariisoow
Image caption Golaha wasiirada cod aqlabiyad ah ku ansixiyay in dhiibistii Qalbi Dhagax loo maray sifo sharci ah
Ka dib waxaa la saaray guddi amuurtan soo baara baarlamaanka horgeeya sidii ay wax u dhaceen. bilooyin ka dibna guddigii waxay baralamaanka horkeenay in dhiibistii Cabdikariin Qalbi-dhagax ay qalad ahayd isla markaasi si sharcidaro ah loogu dhiibay dowladda Itoobiya. Waxaa sidoo kale baaritaankaasi ay gudigu sameeyeen eedeyn loogu jeediyey hay'adaha amaanka.